Bogga ugu weyn 21 Lacag-bixiyaha Sare ee Xag-jirka ah ee 25-jirka ah oo leh Cadaadis Yar
Waxay soo baxdaa marka aad gaarto 25, mas'uuliyaduhu waxay noqdaan kuwo caan ka ah sidii hore. Iyo si aad u buuxiso dhammaan mas'uuliyadaha halkaas kugu soo wici doona, waxaad u baahan doontaa inaad ku lug yeelato dhaqdhaqaaqyo dhinac ah.
Maqaalkan waxaa loo qoray si uu kaaga caawiyo sidii aad 25-sano-jirrada u heli lahayd jahawareer dhinacyo ah oo aad hadda bilaabi karto haddii aad 25 hore tahay. Xitaa haddii aadan gaarin 25, weli waad tijaabin kartaa.
Sida laga yaabo inaad ogaato, ku -mashquulka dhinacyadu waxay kaa rabaan inaad si habboon u maareeyso waqtigaaga si aad uga fogaato walaac ka hor intaan maalinta dhammaanin. Xusuusnow hadafku waa in la sameeyo xoogaa lacag caddaan ah oo qabow.
Waxaa xiiso kuu yeelan doonta inaad ogaato in xiisaha soo socda ee halkan ku taxan aysan ahayn kaliya kuwo aan walwal lahayn oo lacag bixinaya laakiin sidoo kale madadaalo leh. Ma jiraan wax la mid ah ku raaxaysiga iyo jeclaanta waxaad samaynayso.
Markaa runtii qaado waqtigaaga si aad u akhrido maqaalkan. Dhanka kale, ka eeg miiska dulucda dulmar guud oo ku saabsan waxa laga filayo maqaalkan.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah xamaasadaha dhinaca laga yaabo inaad tixgeliso haddii aad tahay 25 ama ka kor. Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato inaad tixgeliso xitaa haddii aadan ahayn 25. Barashada xirfadaha markaad da 'yar tahay waxay kaa dhigaysaa khabiir iyaga ka hor intaadan gaarin 25.
Aan hoos ku eegno.
Uma baahnid inaad xoog ku yeelato Maadooyinka Sayniska si aad u noqoto macallin. Ilaa iyo intaad aqoon aasaasi ah u leedahay maado kasta, waxaad tixgelin kartaa umeerin.
Waxa ugu fiican ee kan ku saabsan ayaa ah inaad sidoo kale naftaada horumariso intaad macalinka tahay. Waa inaad khariidad ka samaysaa qorshooyinka casharka, ka heli kartaa ardayda internetka; waxaad kaloo ka qayb qaadan kartaa casharada guriga dhexdiisa iyo sidoo kale umeerin dugsiyada.
2. Ku iibinta Amazon
Waxaad bilaabi kartaa liiska iyo iibinta alaabada Amazon. Alaabooyin yar oo ku taxan Amazon waxaa iibinaya shirkadda lafteeda halka inta badan ay iibinayaan dhinac saddexaad oo iibiya kuwa bixiya Amazon lacag si ay u taxaan alaabtooda.
3. Baridda xirfad
Dhawaan, dhallinta caqliga lihi waxay bilaabeen inay bartaan xirfado cusub si ay u taageeraan waxay hore u samayn jireen Qaar waxay bilaabayaan inay bilaabaan wax cusub si had iyo jeer lacagtu ugu soo qulqulayso.
XIDHIIDHKA: 19 Lacag Bixin Badan Oo Loogu Jiro Aabbayaasha Cadaadiska Yar | 2022
Sidaa darteed haddii aad leedahay xirfad gaar ah, oo aad xamaasad u qabto oo aad aad ugu fiican tahay, waxaad ka heli kartaa lacag sida ku -mashquulsan dhinaca waxbaridda dadka. Waxay noqon kartaa farshaxan, alwaax ama nijaar, dubista, ama xitaa bara fanka dagaalka, isboortiga, iwm Waxay noqon kartaa wax walba.
Waxaad noqon kartaa qaybiyaha Instacart. Kani waa app-ka raashinka raashinka ee isla maalintaas oo macaamiishu ay ku xushaan waxyaabaha ay rabaan, ka dibna qofku wuxuu aadi karaa amarada si uu lacag u helo.
Tan waxaa lagu magacaabaa gig economy waxayna u shaqaysaa si ka dhakhso badan marka aad joogto meel fiican sida magaalooyinka waaweyn. Waxaa jira goobo badan sida Instacart oo aad ku biiri karto. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad baarto iyaga.
5. La -talinta Freelancing
Xirfadda ama ka ganacsiga ka sokow, waxaad baratay ama waad baran kartaa la -tashiga si aad uga kasbato wax -qabad dhinac ah. Halkan waxaad ku bixisaa adeegyo ka badan badeecada oo si dhakhso leh ayey u shaqaysaa.
6. Xisaabinta, Canshuuraha iyo Adeegyada Maaliyadeed
Aqoonta xisaabaadka ama maaliyadda ayaa wax badan ka tari doonta sidii aad halkan ku kasban lahayd.
Inaad haysato shahaado iyo ruqsad waxa aad rabto inaad bixiso ayaa kaa caawin doonta inaad shaqadaada si fiican u qabato laakiin haddii aadan samayn, wax walwal ah ma leh, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ka ogaato goobtaada, magaaladaada, gobolkaaga ama waddankaaga sida loo helo waxa loo baahan yahay shahaado ama ruqsad shaqo, markaa waxaad bilaabi kartaa inaad hesho lacag caddaan ah oo qabow.
Blog-ga ayaa xoogaa gaabis ah waxayna leedahay qalooc waxbarasho oo aan sinnayn laakiin waxay leedahay faa iido dakhli oo dheer waana mid aad u yar oo aan walwal lahayn. Waa muhiim inaad hesho niche ka hor intaadan blog -ga gelin.
Tani sidoo kale waa xamaasad dhinac-dheer ah sida baloog-dhigista. Wax badan ma heli doontid bilowga laakiin mustaqbalka fog, waad ka faa'iideysan doontaa.
Halkan waxaad ku yeelan kartaa sumado kafaala -qaadaya fiidiyowga ama aad ku biiri kartaa magacyo ama alaabo kala duwan oo aad kasbato adoo tixraacaya dadka.
Si kastaba ha ahaatee, joogteynta ayaa halkan looga baahan yahay maxaa yeelay marka ay joojiyaan soo gelinta waxa ku jira, dadku waxay joojin doonaan daawashada kanaalkaaga oo dakhligaaga ayaa hubaal hoos u dhici doona.
XIDHIIDHKA: 11 Daraasado Cilmi -baaris Online ah oo Lacag -bixin ah oo ugu Fiican oo Bixiya $ 150/saac 2022 -ka
9. Daabacaadda Kindle
Waxaad ka kasban kartaa iibinta buugaagta elektaroonigga ah sida buuq dhinac ah. Haddii aad ka fekereyso inaad la xiriirto alaabada jirka, alaabada, adeegyada iwm ee Amazon way adag tahay, markaa tixgeli iibinta buugaagta elektaroonigga ah ama daabacaadda buugaagta si toos ah Amazon iyo aalado kale oo badan oo faa iido badan oo internetka ah.
Waxaad ku qori kartaa badeecadahaaga ama Adeegyada aad ku bixiso Airbnb. Haddii aad leedahay qol firaaqo ah waxaad ku qori kartaa kirada qayb ahaan, kirada habeenkii. Waxa kale oo aad liis gareyn kartaa taleefoonnadaada si caddaalad ah loo adeegsaday, laptop, iyo alaabo kale oo aad u badan si aad u kasbato.
Waxaad ku kasban kartaa podcasting iyada oo loo marayo heshiisyada xayeysiinta iyo kafaala qaadka. Halkan waxaad kula wadaagi kartaa aqoontaada mawduucyada dalwaddu soo jiitaan dadka. Waxa kale oo aad ku kasban kartaa adiga oo wareysanaya martida on podcasts.
12. Qoritaanka Resume ama Warqadda Daboolida
Ma xuma haddii aad barato sida loo qoro resume ama warqad dabool leh. Haddii aad sidoo kale aqoon hore u leedahay HR, maareeyaha shaqaalaynta ama shaqaalaysiinta, waxaad u qori kartaa warqad dabool ah ama dib u bilaabi kartaa shaqo doonka. Si kastaba ha noqotee, buuqa dhinacani si fiican uma bixin karo laakiin waxaad isticmaali kartaa waxaad kasbatay si aad u beddesho maaliyadda aad qarashgareyso.
13. Akhrinta iyo Tafatirka
Haddii aad si fiican u difaaci karto luuqaddaada Ingiriiska oo si faahfaahsan u jihaysan waxaad ka kasban kartaa Proofreading ama Editing. Ururo badan, Qoraayaal, shaqsiyaad, iyo ururo aan macaash doon ahayn ayaa lacag siiya Proofreaders iyo tifaftireyaasha madaxa banaan. Tani waxay kuu horumarin doontaa wax badan waxayna xitaa ku siin doontaa dalabyo shaqo iyo wareysiyo badan. Raadi macaamiishaada oo kasbato qabow.
14. Noqo Kaaliyaha dalwaddii
Ka jawaabidda emaylka, ka jawaabidda wicitaannada, jadwalka jadwalka, samaynta biilasha, Huteelada jarta, ballamaha, iwm waxay noqon kartaa daal iyo hawl gaar ahaan qof aad mashquul u ah waana sababta ay dadkani u shaqaaleeyaan kaaliyayaal hoos u dhiga liiskan.
Waxaad ka kasban kartaa wax badan sidii buuq dhinac ama wax badan oo aad u beddesho ganacsi waqti-buuxa ah marka aad shaqaaleysato oo aad ballaariso gaarsiinta macmiilkaaga.
15. Etsy ku iibi Farshaxanka iyo farshaxanka
Waxaad wax badan ka iibin kartaa halkan dahabka, dib -u -bilaabista/cv -yada iwm. ,
XIDHIIDHKA: Iibinta Tradelines ee 2022: Samee $ 1500/hr Aad u Fudud & Degdeg
Kaamiro tayo sare leh iyo sawir qaadid ayaa kuu soo qaadan doonta lacag caddaan ah sida xiisaha dhinaca. Waqtigaaga firaaqada ah waad ka qaybgeli kartaa munaasabadaha sida aroosyada, maalmaha dhalashada, xafladaha hawlgalka iwm.
17. Ku tuur alaabta eBay
Tani waa mid aad u fudud. Halkan waxaad ka iibsanaysaa alaab aad rabto inaad iibiso ama ku rogto qiimo jaban oo ku iibiso Qiimo sare.
18. Daryeelka cawska
Haddii aad haysato qalab caws oo tayo sare leh iyo Lawnmower iyo baabuur weyn si aad u gudbiso, markaa waxaad bixin kartaa adeegga daryeelka cawska. Tan waxaa ka mid noqon kara qashin -qubista, joodaridda, cawska jarista, iwm. Tani waxay ku xiran tahay meesha aad joogto, tani waxay sidoo kale si waxtar leh uga shaqayn kartaa tuulooyinka ama magaalooyinka waaweyn oo dadku aad uga taxaddaraan inay qabtaan shaqooyinkan.
Halkan haddii aad ku hadasho in ka badan 2, 3 ama in ka badan oo luqado ah, waxaad ka kasban kartaa turjumidda luqadaha ee dadka, booqdayaasha waddan. Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay 25 jirka.
20. Hagaha dalxiiska
Waxaad ku kasban kartaa lacag adiga oo caawiya dadka soo booqda dal, turjumidda luqadaha, iyo tilmaamaha. Halkan waxay kaaga baahan tahay inaad barato waddooyinkaaga, ogaato meelaha, dhab ahaantii si fiican u yaqaan waddankaaga si marmar aad u hagto booqdayaasha.
Kani waa ficilka qaadashada fiidiyowga ama maqalka oo qor ereyada si aad u akhrido. Waxaad u qori kartaa cajaladaha fiidiyowga, shirkadaha duubista maqalka, fiidiyaha iwm. Tani waxay sidoo kale ku jiri kartaa qaabaynta qoraalka. Halkan waxaan ka heli karnaa macaamiisha boggag sida Upwork, freelance iwm.
Iyada oo ay jiraan 25-jirkan xiisaha dhinaca ah ee halkan ku taxan, waxaad hubsan kartaa in aad kor u qaaddo dakhligaaga oo aad awooddo in aad daryeesho biilashaada. Midkoodna ma aha inuu farageliyo shaqadaada ugu weyn.
Runtii waxaan rajaynayaa inaad qiimo ka hesho halkan.
Siyaabaha ugu raqiisan ee sanduuqyada loogu raro gobol kale sannadka 2022
33 Alaabada ugu Fiican ee Loogu Badalo Lacag Badan 2022 | Samee $ 10k/bishii
Alaabta rogrogmi karta hadda waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud uguna welwelka yar ee lacag caddaan ah lagu sameeyo. Aqoonta ugu wanaagsan…